रोचक खबर Archives - Page2of 15 - Seven Nepal
शनिबार, जेठ २४, २०७७ | Friday, March 15, 2019
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर समाउन स्थानीय प्रविधिको विकास गरेको छ । बाँदर नियन्त्रण अभियान थालेको गाउँपालिकाले स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी एकै दिन दर्जनाँैको सङ्ख्यामा बाँदर समाउन सकिने बनाएको हो । शुरुमा भारतीय नागरिकलाई बोलाएर बाँदर समाउँदै आएकामा अब स्थानीय व्यक्तिलाई नै परिचालन गरी स्थानीय प्रविधिबाट बाँदर नियन्त्रण गर्न थालिएको गाएँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो...
किम जोंगद्वारा डिजाइनर कपडा सार्वजनिक, भोक लाग्दा खान पनि सकिने
उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनले आफ्नो फेशन उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन् । लामो समयसम्म भोकमरीसँग जुधिरहेको आफ्नो देशमा किमले यस्तो डिजाइनर पहिरन सार्वजनिक गरेका छन् जुन स्विमिङ, हाइकिङ र एड्भेन्चर रुचाउनेका लागि निकै सहयोगी हुनसक्छ । डेली मेलका अनुसार यी कपडा निकै विशेष छन् । यसलाई भोक लागेको खण्डमा खान पनि सकिन्छ। किम क्लोदिङ रिसर्च सेन्टरमा बनेका यी कपडलाई फ्लेनलेट फेब्रिकले बनाइएको छ । यो फेब...
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को साटो ‘बहिनी दिवस’ मनाउने विश्वविद्यालयको घोषणा
फेब्रुअरी १४ का दिन प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे मनाइन्छ । तर, पाकिस्तानको एक विश्वविद्यालयले चाहीँ उक्त दिन प्रणय दिवसको साटो भगिनी दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । इस्लामिक परम्परा तथा संस्कृतिलाई बढावा दिनका लागि भन्दै हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा सिस्टर्स डे मनाउने फैसला गरेको हो । फैसलावादस्थित कृषि विश्वविद्यालयले यस्तो निर्णय गरेको विश्वविद्यालयका उप कुलपतिले जानकारी दिएका छन् । विश्वविद्...
महिला फुटबल टोलीले मासिक तलबभत्ता पाउने
काठमाडौँ - नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका सदस्यले मासिक तलबभत्ता पाउने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को हालै बसेको कार्यसमिति बैठकले महिला टोलीलाई मासिक रु सात हजार तलब र रु तीन हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रिय महिला टोलीले तलब र भत्ता पाउने गरेका थिएनन् । एन्फाले ओलम्पिक महिला फुटबलका लागि एशियन छनोटको दोस्रो चरणम...
झापा– अर्जुनधारा नगरपालिका–१० कालिझोडाका ४४ वर्षीय खडानन्द पोखरेलले छिमेकी दुई महिलालाई खुकुरीले प्रहार गरी आफूले आत्महत्या गरेका छन् । मृतकलाई आज बिहान छिमेकी महिलाको घर नजिक खोल्सीमा घाँटी सेरिएर मृत्यु भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार मृतक पोखरेलले आज बिहान सोही वडाका २४ वर्षीया जमुना ओझा र १९ वर्...
काठमाडौँ - स्वतन्त्र सचेत युवा विद्यार्थीले आज अनशनरत विजय थापाको पक्षमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले दिउँसो शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज अगाडि थापाको पक्षमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।उनीहरुले थापालाई उपचारमा सहयोग नगरेको, सरकारी तलबभत्ता, सेवा सुविधा लिएर सरकारविरुद्ध बारम्बार अनशन बस्ने डा गोविन्द केसीलाई बर्खास्तीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका स्वतन्त्र युवा विद्यार्थी भरतसिंह धाँमीले जानकारी गराए ।...
काठमाडौं - बिहेको वर्ष दिन मात्रै पूरा भएको थियो। श्रीमान्, सासूससुरा सपरिवारमा निकै खुसी थियो। तर,मंसिर २ गते साँझ एक्कासि भएको घटनाले उनको जीवन अन्धकार भयो। उनको दाहिने आँखा र दाहिने कानले काम गर्दैन।कानको छेउका सत्रवटा हड्डी भाँचिएका छन्। दाहिने हात पनि चल्दैन। उपचार जारी छ। गोदामचौर १ की २१ वर्षीया बलात्कृत युवतीले उपचारमा लागेको ऋण तिर्न तीन आनामा बनेको घर बेचिसकिन्। यति मात्रैले नपुगेर उ...
यतिसम्म लापर्बाही : काम सरकारी अस्पतालमा, रिफर निजी क्लिनिकमा
रत्ननगर - सरकारी अस्पतालका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । सरकारी अस्पतालका उपकरण बिगारेर, थन्क्याएर वा बिग्रिएको बहाना बनाएर बिरामीलाई निजी अस्पतालमा दौडाउने खेल चितवनमा मौलाइरहेको छ । रत्ननगर बकुलहर अस्पतालमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । लापर्बाही पनि यतिसम्म कि अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सनमै निजी क्लिनिकमा अल्ट्रासाउन्डका लागि रिफर गर्ने ...
१५ करोड लगानीमा ‘नेपाल लोक स्टार, अडिसन सुरु
काठमाडौँ - आयोजना घोषणा गरिएको सिङगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल लोक स्टार’को लागत खर्च साढे १५ करोड हुने भएको छ । आयोजक चाहना मिडियाका अध्यक्ष सहदेव कोइरालाका अनुसार ‘नेपाल लोक स्टार’ कार्यक्रमको लागत १५ देखि साढे १५ करोड अनुमान गरिएको छ । उनका अनुसार पुस १ गतेबाट अडिसन (डिजिटल अडिसन) सुरु भइसकेको छ । “लोक गीत गाउन सक्ने तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई पनि हामी अवसरबाट बञ्चित गराउँदैनौँ,” कोइराला भ...
प्रधानमन्त्रीको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण फलदायी हुन्छ : सल्लाहकार डा. भट्टराई
काठमाडौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी आईतबारबाट हुने ६ दिने स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण फलदायी हुने प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको माघ ६ देखि १२ सम्म हुने उक्त भ्रमण र स्वीट्जरल्याण्डको डाबसमा हुन लागे...